नयाँ दैनिक | वाइसिएलका अध्यक्ष रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे वाइसिएलका अध्यक्ष रेस्टुरेन्टमा काम गर्थे – नयाँ दैनिक
मेरो परिचय जनयुद्ध हो, जनयुद्धप्रति सधैँ गर्व गर्छु : दीपशिखा
माघ १ काठमाडौँ । नेपाली समाजमा दुःख लुकाउने चलन छ । अरुबाट हेपिने डरले मान्छेहरु फुर्ति लगाउँछन्, ठालु पल्टिने गर्दछन् । तर, वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले भने आफ्नो पृष्ठभूमि खुलाएका छन् । जनयुद्धमा सहभागी एक कमाण्डर तथा ‘रात फुलेको याम’ उपन्यासका लेखक सापकोटाले आज आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘म राष्ट्रिय दैनिकमा दिउँसो पिएनको जागिर खान्थेँ, पत्रिका बन्द भएपछि ठमेलको रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ ।’ उनी अहिले सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् ।
यस्तो छ उनको फेसबुक स्ट्याटस :
आजभन्दा ठिक २१ बर्ष पहिला, आजकै दिन अर्थात ०५४ साल माघ १ गते म पूर्णकालिन भएर जनयूद्दमा होमिएको दिन । म अघिल्लो साल एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा दिउँसो पिएनको जागिर खान्थेँ र राति नन्दीरात्रि स्कुल नक्सालमा पठ्थेँ । त्यो साल पत्रिका बन्द भयो र ठमेलमा पिजेरा रेस्टुरेन्ट काम गर्थेँ अनि सिन्धु, काठमाडौं विद्यार्थी संगठनमा राजनीति गर्थेँ ।’
मलाइ छापामार भएको ठाउँसम्म पुर्याउने क.सागर शहिद हुनुभयो, जुन घरमा पहिलो पाइला टेकेको थियो–उ पछि अन्तरघाति भयो र क. सागर मारिनुभयो । त्यो साँझ निसाकार अध्यारोमा भरूवा बन्दुकमा भेटिएकी साहिली दिदिको ममता उनी जनयुद्धभरी जहाँ पुगिन् ति कसैले भुल्दैनन–२ साल भयो, फोन गर्न छाडिन्, सायद आन्दोलन बिग्रियो ठानिन् ।
सुरूका कस्टकर दिनहरूमा अभिभावकको भूमिका निर्वाहा गर्ने हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य क. क्षितिज दाजु र मैले पढेको स्पाटकस जस्ता लाग्ने क. ध्रुव पराजुली ‘सन्तोष’ जसले मलाइ जनयुद्धको महाभेदीमा अडिग बनाउनुभयो, उहाँहरू सधै मेरो श्रद्धामा रहनुहुनेछ । दाजु दीप जसले असनको कोठाबाट महासमरमा पुर्याउनुभयो–उहाँलाइ भन्ने शब्द नै छैन । ति सप्पै जो महायुद्धमा थिए र छन्–सहकर्मी, सहयोद्धा हुँदै सेल्टरवाला किसान बाहरूदेखि आमाहरूसम्म, सबैको नाम लिन सकिन–यो आजको दिन समर्पित !
मेरो परिचय जनयुद्ध हो । मैले लडेको जनयुद्धप्रति म सधै गर्व गर्छु र आज पनि गर्वकासाथ भन्छु–म जनयुद्धको एक सिपाही हूँ । जनयुद्ध र जनयोद्धा जिन्दावाद !